အသည်းကို သန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့ မန်ကျည်းသီးဖျော်ရည်ပြုလုပ်နည်း - Tameelay
အသည်းကို သန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့ မန်ကျည်းသီးဖျော်ရည်ပြုလုပ်နည်း
မန်ကျည်းသီးကို စားဖြစ်ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ သိချင်မှသိပါလိမ့်မယ်။
တခါတလေ အဖိုးတန်တဲ့ ဆေးဝါးတွေထက်တောင် ကျွန်မတို့ စားသုံးနေတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ မလှဲလိုက်နိုင်ပါဘူး။
မန်ကျည်းသီးမှာပါဝင်တဲ့ အက်ဆစ်ဓါတ်တွေက အသည်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မန်ကျည်းသီးဟာ အသည်းအဆီဖုံးတာတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
အသည်းဟာ ကျွန်မတို့ ခန္တာကိုယ်ရဲ့ အဓိကအရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။
မန်ကျည်းသီးမှည့်ကို ဒီအတိုင်းစားပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖျော်ရည်လုပ်ပြီးသောက်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်းကိုကောင်းမွန်ပါတယ်။
မန်ကျည်းသီးမှာ အမျှင်ဓါတ်တွေအများအပြားပါဝင်ပြီး အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေလို့ ၀မ်းချုပ်မှာ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
အသည်းအဆီဖုံးတာကို ကုသပေးဖို့ မန်ကျည်းသီးဖျော်ရည်ပြုလုပ်နည်း
မန်ကျည်းသီး အခွံခွာပြီးသား လက်နှစ်ဆုတ်စာ
မန်ကျည်းသီးကို အစေ့ထုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ဖျော်စက်ထဲထည့်ပါ။ ရေ ၁ လီတာကို ထည့်လိုက်ပြီး ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်းထည့်ပါ။
ဒီဖျော်ရည်ကို နေ့တိုင်းသောက်ပါ။ ၇ ရက်နဲ့ ၁၀ ရက်ကြာရင် အသည်းမှာအဆီဖုံးတာကို ဖယ်ရှားပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
တစ်လကိုတစ်ခါ အဲလိုလုပ်ပြီးသောက်ပေးပါ။ ၃ ရက်တစ်ခါသောက်ပေးလည်းရပါတယ်။
တကယ်ကိုနည်းနည်းချည်နေတယ်ဆိုရင် ပျားရည်ကို ထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
အသညျးကို သနျ့စငျပေးနိုငျတဲ့ မနျကညျြးသီးဖြျောရညျပွုလုပျနညျး
မနျကညျြးသီးကို စားဖွဈပမေဲ့ သူ့ရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးဘယျလိုရှိလဲဆိုတာ သိခငျြမှသိပါလိမျ့မယျ။
တခါတလေ အဖိုးတနျတဲ့ ဆေးဝါးတှထေကျတောငျ ကြှနျမတို့ စားသုံးနတေဲ့အစားအစာတှနေဲ့ မလှဲလိုကျနိုငျပါဘူး။
မနျကညျြးသီးမှာပါဝငျတဲ့ အကျဆဈဓါတျတှကေ အသညျးကို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မနျကညျြးသီးဟာ အသညျးအဆီဖုံးတာတှကေို ဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။
အသညျးဟာ ကြှနျမတို့ ခန်တာကိုယျရဲ့ အဓိကအရေးကွီးတဲ့ အင်ျဂါအစိတျအပိုငျးတဈခုပါ။
မနျကညျြးသီးမှညျ့ကို ဒီအတိုငျးစားပေးတာပဲဖွဈဖွဈ ဖြျောရညျလုပျပွီးသောကျပေးတာပဲဖွဈဖွဈ အရမျးကိုကောငျးမှနျပါတယျ။
မနျကညျြးသီးမှာ အမြှငျဓါတျတှအေမြားအပွားပါဝငျပွီး အစာခစြေနဈကိုကောငျးမှနျစလေို့ ဝမျးခြုပျမှာ စိတျပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
အသညျးအဆီဖုံးတာကို ကုသပေးဖို့ မနျကညျြးသီးဖြျောရညျပွုလုပျနညျး
မနျကညျြးသီး အခှံခှာပွီးသား လကျနှဈဆုတျစာ
ရေ ၁ လီတာ
မနျကညျြးသီးကို အစထေု့တျလိုကျပါ။ ပွီးရငျဖြျောစကျထဲထညျ့ပါ။ ရေ ၁ လီတာကို ထညျ့လိုကျပွီး ပြားရညျ စားပှဲတငျဇှနျး ၁ ဇှနျးထညျ့ပါ။
ဒီဖြျောရညျကို နတေို့ငျးသောကျပါ။ ၇ ရကျနဲ့ ၁၀ ရကျကွာရငျ အသညျးမှာအဆီဖုံးတာကို ဖယျရှားပေးသှားပါလိမျ့မယျ။
တဈလကိုတဈခါ အဲလိုလုပျပွီးသောကျပေးပါ။ ၃ ရကျတဈခါသောကျပေးလညျးရပါတယျ။
တကယျကိုနညျးနညျးခညျြနတေယျဆိုရငျ ပြားရညျကို ထပျထညျ့နိုငျပါတယျ။
သင် ဒီ (၅) မျိုးနဲ့ လုံးဝ လုံးဝ အတူတူ မအိပ်ပါနဲ့…!
၁. နာရီ ၀တ်ပြီး မအိပ်ပါနဲ့ နာရီ ဟာ ရေဒီယို သတ္တိကြွ ထုတ်လွှင့်မှု အတော်မြင့်မားပါတယ်… နာရီ ဟာသေးငယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ ၀တ်ဆင်ပြီး အချိန်ကြာကြာ အိပ်ခဲ့ရင်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး ကို ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်တဲ့…. ဒါကြောင့်အိပ်တဲ့အခါ နာရီ ကို ချွတ်ပြီးအိပ်ကြပါ.. ၂. အမျိုးသမီး များ ဘရာ …
သွေးကြောထုံးတာ လူအတော် များများကြုံရတဲ့ ပြသနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါ ခံစားသူအချို့က တခြားကုထုံး တွေအကြောင်း ဖတ်ဖူးထားတာမျိုး ရှိနိုင်ပေမယ့် ဒီခရမ်းချဉ်သီး ကုသနည်းလေးကိုတော့ သိချင်မှ သိကြပါလိမ့်မယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးမှ ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်း သိထားကြပေမယ့် သွေးကြောထုံးခြင်းကို ကုသပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိရှိသူ အနည်းအကျဉ်း သာရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ခရမ်းချဉ်သီးမှည့်နဲ့ …
မီးကွင်းဂမုန်းပင်သည် အလွန်ပင်ဆေးဖက်ဝင်သော အဖိုးတန်အပင်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအပင်ကို နေရာတိုင်းမှာ လွယ်ကူစွာ မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ (၁) နှာခေါင်းသွေးလျှံအတွက် မီးကွင်းဂမုန်း နှာခေါင်းသွေးလျှံဖြစ်လာပါက မီးကွင်းဂမုန်းပင်ကို ရေစင်အောင်ဆေးကာ ထောင်း၍ ၄င်းအဖတ်ကို နှာခေါင်းပေါ် အုံပေးပါက နှာခေါင်းသွေးတိတ်စေပါသည်။ (၂) ဆီးရောဂါ၊ ဆီးကျောက်ရောဂါ ဆီးရောဂါအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီးကျောက်ရောဂါများအတွက် မီးကွင်းဂမုန်းကို …